Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao Football Football Ny tantaran'i Donny van de Beek momba ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny sariitatry ny baolina kitra miaraka amin'ny solon'anarana "Mardonny". Ny tantaranay Donny van de Beek Childhood sy ny Untold Biography Facts dia mitondra aminao ny tantara feno momba ny zava-nitranga miavaka hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny famakafakana dia ahitana ny fiainany voalohany, ny fiainam-pianakaviana, ny fiainany manokana, ny zava-misy ara-pianakaviana, ny fomba fiainany ary ny zavatra hafa fantatra momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra ny fahaizany mamonjy sy ny fitazonana fitazonana baolina. Na izany aza, vitsy ny mihevitra ny Biography Donny van de Beek izay tena mahaliana. Izao raha tsy mila ado intsony, andao hanomboka.
Donny van de Beek Tantara momba ny fahazazana sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography Fiainana tany am-piandohana sy fianakaviana
Manomboka, Donny van de Beek dia teraka tamin'ny andro 18 ny volana aprily 1997 tao Nijkerkerveen any Holandy. Izy no voalohany amin'ny zanaka roa naterak'i Gerdina van de Beek sy ny rainy, Andre van de Beek.
Ny teratany holandey teratany fotsy dia avy amin'ny fianakavian'ireo saranga antonony ary nitaiza ny ray aman-dreny roa tao Nijkerkerveen any Holandy izay nahalehibe azy niaraka tamin'ny zandriny Rody van de Beek.
Nobeazin'i Gerdina sy Andre ray aman-dreniny i Donny van de Beek. Credit: Nijkerk.
Nihalehibe tao amin'ny trano fambolena iray tao Nijkerkerveen, ny tanora Donny tamin'ny voalohany dia tsy nanahy momba ny baolina kitra tamin'ny fahazazany. Ny tanora dia avy eo nisafidy ny hihanika hazo sy handany fotoana miaraka amin'ny biby.
Toy izany koa, Donny dia namorona fahalianana amin'ny fikarakarana ny vorona ny fianakaviany, ny fivoarana izay nahita azy nihanika tamina tafo teo an-tampon-tanànan'ny toeram-piompiana tamin'ny alàlan'ny tsato-bolany.
Donny van de Beek Tantara momba ny fahazazana sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography Fanabeazana sy fanabeazana
Tsy ampy dimy taona i Donny tamin'izy nanomboka nianatra tao amin'ny sekoly iray tsy fantatra anarana tao Nijkerkerveen. Raha tany an-tsekoly ilay tanora dia voalaza fa zaza mahazatra izay tony ary tsy saro-kenatra tahaka ny sakaizany.
Tamin'ny fotoana nanombohan'i Donny efa-taona, dia noraisin'i Andre rainy hijery lalao baolina kitra tao amin'ny kianja Ajax. Avy hatrany i Donny dia nametraka fahalianana amin'ny fanatanjahantena ary avy eo dia nisoratra anarana tao amin'ny klioba Veensche Boys.
Mbola tanora i Donny Van De Beek, fony ny rainy nitondra azy voalohany hijery lalao baolina kitra. Credit: Instagram.
Mampahatsiahy ny andro voalohany niarahan'i Donny tamin'ny fiofanana niaraka tamin'i Veensche Boys, nanambara i Andre rainy: "Tena tsara tokoa i Donny nandritra ny fiofanana ary nataony ny laharam-pahamehana ho voalohany indrindra tamin'izany andro izany".
Donny van de Beek Tantara momba ny fahazazana sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography Ny fiainam-piarahamonina tany am-piandohana sy ny lalana mankany amin'ny tantara
Tao amin'ny Veensche Boys no nandanian'i Donny tanora sy feno avonavona nandritra ny taona vitsivitsy mba hanomezana voninahitra ny fahaizany amin'ny baolina kitra ary koa nianatra ny fomba fanaovana mpandalovana mamirapiratra izay toetra mampiavaka ny fomba filalaovany ankehitriny.
Tsy ela akory izay talohan'ny fampisehoana tanora dia nanintona ny sain'ireo klioba ambony indrindra ao anatin'izany i Ajax izay nanaiky ny iraika ambin'ny folo taona tamin'izy ireo tao amin'ny oniversite nanan-daza tamin'ny taona 2008.
Nanatevin-daharana tao amin'ny Akademia Ajax tao 2008 i Donny van de Beek. Credit: AjaxShowTime.
Donny van de Beek Tantara momba ny fahazazana sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography Mitsangàna mba haka tantara
Raha tany amin'ny rafitra tanora an'ny Ajax, i Donny dia niarina tsikelikely tamin'ny laharana ary nametraka ny tenany ho iray amin'ireo mpilalao mendrika indrindra ao amin'ny klioba, fampandrosoana izay nahazoany fampiroboroboana ny ekipa voalohany Ajax ao 2014.
Na dia nanao fampisehoana 6 fotsiny aza i Donny tamin'ny vanim-potoana voalohany, dia nihatsara foana izy ary nanomboka nandrakitra fisehoana tsy tapaka nanomboka tamin'ny taona 2016. Ny ambiny, raha ny nambarany dia tantara.
Donny van de Beek dia nandrakitra fisehoana mahazatra ho an'ny Ajax hatramin'ny 2016. Credit: Youtube.
Donny van de Beek Tantara momba ny fahazazana sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography Fiainana mifandraika amin'ny fiainana
Mbola tsy manambady i Donny amin'ny fotoana nanoratana. Izahay dia mitondra anao ny zava-misy momba ny tantaram-piainany ary ny fiainany ankehitriny. Hanomboka, i Donny dia tsy fantatra fa nisy ifandraisany tamin'ny nifankahitan'izy ireo, Marijn van Eijkelenburg, efa ela.
Donny van de Beek amin'ny sary tia sary miaraka amin'ny tovovavy atao hoe Marijn. Credit: Spelersvrouw.
Ireo olon-tiana izay avy any an-tanàn-dehibe iray dia mifankatia am-pitiavana mandritra ireo fahatanorany ary nijanona ho mpivady hatrizay hatrizay. Mandritra izany fotoana izany, Donny dia tsy manana zanakalahy (s) na zanakavavy (s), fampivoarana mety miova raha maka ny fifandraisany amin'i Marijn amin'ny ambaratonga manaraka.
Donny van de Beek Tantara momba ny fahazazana sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography Mitantara ny fiainam-pianakaviana
Donny van de Beek dia teraka tao anatin'ny fianakaviana iray misy mpikambana efatra no entinay aminao ny zava-misy momba ny fiainany.
Momba ny Rain'i Donny van de Beek: I Andre van de Beek no dadan'i Donny. Na dia tsy mpilalao amin'ny baolina kitra mihitsy aza i Andre dia nanompo tamin'ny maha mpitarika ny Veensche Boys izy ary nomena alalana izy tamin'ny fampidirana an'i Donny zanany lahy tamin'ny baolina kitra fony izy mbola 4. Mifanaraka tsara amin'i Donny ny rain'ny roa izay manohana azy ary miasa amin'ny maha mpanazatra azy tsy ofisialy.
Donny van de Beek ao amin'ny sary amin'ny fahazazana miaraka amin'i Andre rainy. Credit: Veenscheboys.
Momba ny Renin'i Donny van de Beek: Gerdina van de Beek dia maman'i Donny. Mizara fifandraisana tsara amin'i Dony izy ary mankafy ny fizarana ireo antsipirihany momba ny fahazazan'ny mpanao hatsikana mpilalao baolina kitra eran'izao tontolo izao. Tsy toy ny ankamaroan'ny reny ny mpilalao baolina kitra, i Gerdina dia tia tena amin'ny fanatanjahantena ary nanampy an'i Donny nanangana an'i Donny ho lasa mpilalao izy ankehitriny.
Donny van de Beek sy ny reniny Gerdina. Credit: Nijkerk.
Momba ny Rahalahin'i Donny van de Beek: Tsy manana anabavy i Dony afa-tsy ny zandriny iray antsoina hoe Rody. toa an'i Donny, nanomboka nanao fiofanana tao amin'ny Veensche Boys ny an-dramatoa saingy tsy nifarana izy io ho lasa mpilalao malaza sy mampientam-po toa an'i Donny. Na izany aza, Rody dia iray amin'ireo mpankafy indrindra an'i Donny ary mizara fifamatorana akaiky aminy.
Donny van de Beek sy zandriny Rody. Credit: Instagram.
Momba ireo havan'i Donny van de Beek: Lavitra ny fianakavian'i Dony akaiky dia fantatra momba ny raibeny sy ny renibeny ary koa ny raibeny. Toy izany koa izy, mbola tsy hampahafantatra momba ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy sy ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy izy, fampandrosoana iray izay miampita ny zana-baravarana ho an'ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy, zanak'olo-mpiray tam-po aminy, zanak'olo-mpiray tam-po aminy.
Donny van de Beek Tantara momba ny fahazazana sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography Ny fiainan'ny tena manokana
Inona no mahatonga an'i Dony Van de Beek manamarika? mipetraka eo am-pitondrana rehefa entinay mitondra ny toetrany ianao mba hanampiana anao hanana sary feno momba azy. Hanomboka, ny persona Dony dia karazan'ny toetran'ny Aries Zodiac. Mihevi-tena araka ny antonony izy, mazoto ary mahalala tsara izay tadiaviny.
Raha heverina ho mpandala ny nentin-drazana akaiky dia nilaza ny antsipirihany momba ny fiainany manokana sy ny fiainany manokana i Donny, anisan'izany ny fialamboly toy ny mipetraka ao anaty jacuzzi, mihantona amin'ny namany sy milalao zana-tsipìka. Manana tombony amin'ny lamaody, lakana ary ady totohondry ihany koa izy.
Donny (voalohany avy havanana) dia tsy misintona fotoana hiarahana amin'ny namana. Credit: Instagram.
Donny van de Beek Tantara momba ny fahazazana sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography Fiainana momba ny fiainana
Na dia mbola jerena aza ny sandan'ny Donny Van De Beek, dia manana vidiny 22.50 tapitrisa Pounds toy ny tamin'ny fotoana nanoratana. Ny afovoan-dehilahy izay avy amin'ny harena ivelan'ny baolina kitra dia tsy fantatra, miaina fomba fiaina amin'ny saranga antonony ary toa nanangana fatiantoka iray izay manakana azy tsy hanao mihoatra ny karama na ny karamany.
Ny tena lanjan'ny tranony ao Nijkerkerveen dia mbola azo antoka tsara fa tsy fantatra firy momba ny fanangonana ny fiarany. Na eo aza izany dia tsy misy fandavana ny zava-misy fa afaka manidina amin'ny fiaramanidina izy ary manao tsinontsinona matetika amin'ny tsena miantsena.
Donny van de Beek dia mpivarotra mahazatra ary mandany vola mandritra ny hetsika tahaka izao. Credit: Instagram.
Donny van de Beek Tantara momba ny fahazazana sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography Untold Facts
Mba hamonosana ny tantaram-piainan'i Donny van de Beek eto dia misy zava-misy tsy fantatra na somary fantatra kokoa ary tsy dia tafiditra ao amin'ny bio-ny.
Kely no fantatra momba ny fivavahan'i Donny. Na izany aza, ny fahavoazana dia manome alalana azy ho mpino.
Tsy tia tombokavatsa na zavakanto vatana i Donny. Araka izany, tsy misy toa azy tamin'ny fotoana nanoratana.
Donny Van De Beek dia nitazona hoditra tsy misy pentina hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Credit: Instagram.
Mbola tsy hita hosotroina izy io, fampivoarana izay manome fahatokisana azy.
Donny van de Beek Tantara momba ny fahazazana sy zava-misy momba ny fiainana an-tsary Untold Video Summary
MIEZAHA HAHAY: Misaotra tamin'ny famakiana ny tantaran'ny Donny van de Beek Childhood ary ny Untold Biography Facts. amin'ny LifeBogger, Miezaka izahay mba hanana ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mety, dia zarao aminay ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hanome voninahitra sy hanaja ny hevitrao foana izahay.